Qaab ceynkee ayaa madaxweyne Farmaajo loogu soo dhaweeyay dalka Kenya (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Qaab ceynkee ayaa madaxweyne Farmaajo loogu soo dhaweeyay dalka Kenya (SAWIRO)
Wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa gelinkii dambe ee shalay gaaray magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, halkaas oo uu ku joogi doono booqasho rasmi ah oo qaadan doonta muddo 3 maalmood ah.
Wafdiga madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Jommo Kenyatta (JKIA) kusoo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda Kenya Marwo Aamina Maxamed, Hoggaamiyaha Aqlabiyadda Baarlamaanka Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale iyo Wasiirro kale oo ka tirsan dowladda Kenya.
Madaxweynaha ayaa maanta oo khamiis ah la kulmi doonno dhiggiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta, waxayna ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada dal, isagoona sidoo kale halkaasi kula kulmi doonno ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku sugan.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Farmaajo ayaa ka qeyb gali doona shir ay magaalada Nairobi ku yeelanayaan madaxda urur goboleedka IGAD oo 25-ka bishaan halkaasi ka dhici doonno.
Shirkaas ayaa waxaa diiradda lagu saari doonnaa arrimo dhowr ah oo gobolka khuseeya oo ay ugu horeeyso arrinta qaxootiga dalkaasi Kenya ku nool.